Majaajilooyin si fudud loo soo sawiro: maxay noqon karaan iyo barnaamijyo la isticmaali karo | Abuurista khadka tooska ah
Encarni Arcoya | | Dhiirrigelinta
Comics, strips majaajilo, majaajilo, manga ... Taasi miyay u egtahay aqoon? Muddo sanado ah, waxay qeyb ka ahaayeen aqrintayada, malaha maantana waxay kamid yihiin kuwa loogu isticmaalka badan yahay in lagu dhiirrigeliyo carruurta inay wax akhriyaan. Xaqiiqdii, waa dhibaato in waqti uun noloshaada ka mid ah, aad ku dhiirrigelisay inaad abuurto majaajillo kuu gaar ah, xitaa haddii aadan ku fiicnayn wax sawiridda. Waagii hore, taasi way adkayd, laakiin hadda waxaa jira majaajilooyin badan oo si fudud loo soo sawiro waana sababta oo ah adeegsiga sawirro, barnaamijyo iyo barnaamijyo "kombuyuutar" ku sameeya farshaxanimada
Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato si fudud loo sawiro majaajillada, Sidoo kale weydiinta waa maxay aasaaska majaajillada iyo nooca barnaamijyada, barnaamijyada, aaladaha ... ayaa kaa caawin kara, halkan waxaad ka heli doontaa jawaab.
1 Waa maxay majaajilo?
2 Waxyaabaha la tixgelinayo inay ka dhigaan majaajilada si sahlan oo loo sawiro
2.3 Qaabka majaajilada
3 Si fudud loo sawiro noocyada majaajillada
3.1 Marka loo eego qaabka majaajilada
3.2 Maadooyinka ugu fudud ee la sawiro
4 Abuuritaanka majaajilada iyada oo aan la aqoon sida loo sawiro, suurtagal ma tahay?
Waa maxay majaajilo?
Marka ugu horeysa, waa inaan qeexnaa waxa majaajiladu tahay. Sida laga soo xigtay RAE, majaajiladu waa silsilad ama taxane taxane ah oo sheeko sheegaaya. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadleynaa buug, joornaal, majaajillo, manga ... oo ka sheekeynaya sheekada jilayaashaas isagoo adeegsanaya sawirro iyo qoraal gaaban.
Ma jiro ugu yaraan ama dherer ugu badnaan markay tahay sameynta majaajillada. Xaqiiqdii, waxaad ogaan kartaa in hal-qol oo majaajillo majaajillo ah laftiisu uu yahay majaajillo, laakiin waxaan sidoo kale xusi karnaa shaqooyinka sida Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach ... kuwaas oo ah gacmo-gacmeedyo fara badan (oo is-dulsaaran).
Waxyaabaha la tixgelinayo inay ka dhigaan majaajilada si sahlan oo loo sawiro
Haddii aad rabto inaad bilowdo sawiridda majaajilladaada, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad ogaato waa saldhigyada ay u baahan tahay. Waana taas, sida riwaayad, gabay, ama sawir, waa muhiim in la ogaado waxa la doonayo in la joogo (oo qeexaya majaajillo). Sidaa darteed, arrimaha ugu muhiimsan waa kuwa soo socda:
Waa inaad dejiso cidda noqon doonta, ama ugu yaraan, yaa noqon doona halyeeyada si ay u awoodaan inay siiso muhiimadda ay leedahay. Sida iska cad, waad gali kartaa jilayaal badan sida aad rabto, labadaba kuwa waaweyn iyo kuwa sareba.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadleynaa taariikhda majaajillada, waxaad rabto inaad ka sheegto. Xitaa haddii aad isticmaasho majaajillo saddex gole keliya leh, waxaad u baahan tahay inaad macno u yeelatid saddexdaas sawir, maxaa yeelay haddii kale waxba lama fahmi doono.
Halkan waa halka aad ka dooraneyso majaajiladaha sawirada fudud ama kuwa ka sii adag. Waxayna ku xirnaan doontaa haddii waxa aad rabto inaad sameyso ay yihiin qosol kaftan ah oo xamuulka qaar ka mid ah, haddii aad rabto inaad sameysato bog dhan, ama xitaa haddii aad rabto inaad yeelato bogag badan si aad u abuurto sheeko cufan.
Haddii ay tahay markii ugu horreysay, waxaan kugula talineynaa inaad doorato ikhtiyaarka koowaad, maadaama sidan oo kale aad awoodid inaad ku tababbarto.
Si fudud loo sawiro noocyada majaajillada
Farshaxanno buugga majaajilada ku dhex jira, waxaa jira qaabab badan oo kala duwan. Qofka diirada saara sheekooyinka jacaylka la mid ma aha, tusaale ahaan, kuwa iyagu doorbidaya inay sawiraan shaashadaha majaajillada, kaftanka, xiisaha, iwm. Taasina waxay ka dhigeysaa inay jiraan noocyo badan oo majaajillo ah, qaarna ka sahlan yihiin kuwa kale. Laakiin qaababkee jira? Oo midkee baa ugu fudud?
Marka loo eego qaabka majaajilada
Waxaan kuu sheegi karnaa taas, iyadoo kuxiran qaabka majaajilada, waxaad sameyn kartaa waxyaabaha soo socda:
Adventure. Waa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan iyo sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Waxaa sidoo kale loo yaqaan noocyo ficil ah in kasta oo ay inta badan diiradda saaraan dhagaystayaasha ragga, runtu waxay tahay inaysan jirin wax u diidaya inay yeeshaan dhagaystayaal dumar ah.
Dagaal jecel. Qaabkani wuxuu bilaabay inuu caan noqdo 40-yadii, gaar ahaan waxaa baray Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Kaftan. Waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, waana mid inkasta oo ay u muuqato wax fudud, mararka qaarkoodna sidaas uma fududa.
Kabo-qaate Tani waa wax badan oo isku dhafan oo u dhexeeya casriga iyo kaftanka.
Kacsi Qaarkood waxay ugu yeeraan muuqaal qaawan, oo, sida magacyadooda ka muuqata, waxa ay qabato waa sheeko ku saabsan dabeecad galmo, halkaas oo sawirka iyo onomatopoeia ay kaga adkaanayaan sheekada lafteeda (ama qoraalka).
Cajiib ah. Iyada oo ku saleysan halyeeyo la dagaallama sharwadayaasha, iyo halka wanaaggu had iyo goor ka guuleysto xumaanta.
Taariikhi ah. Dariiq loo dhowaado taariikhda waddan, ama dhacdo taariikhi ah, iyada oo loo marayo sawirro.
Jacayl. Xaaladdan oo kale, oo ka duwan kan kacsiga, waxa ugu muhiimsan waa jacaylka iyo sheekada jacaylka ee ka dhex aloosanta jilayaasha, iyada oo aan la sharraxayn, ama xitaa muuqaal ahaan, nooca noocan ah ee galmada.
Maadooyinka ugu fudud ee la sawiro
Markaad ka fekereyso inaad sawirto majaajillo, oo ku saleysan qaababka aan kor ku soo sheegnay, waxay u badan tahay taas kuwa xiisaha leh, kaftanka iyo caadooyinka ayaa ah kuwa ugu fudud ee la sawiri karo, maadaama ay yihiin mowduucyo soo jiidan kara qofka ama heli kara dhagaystayaal aad u tiro badan si ay isu muujiyaan.
Waxay sidoo kale yihiin mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee aad ka heli karto, gaar ahaan jilayaasha noocyo gaar ah oo la abuuray.
Abuuritaanka majaajilada iyada oo aan la aqoon sida loo sawiro, suurtagal ma tahay?
Ugu dambeyntiina, waxaan dooneynaa inaan ka hadalno dhibaato ay dad badani lahaan karaan: doonista sameynta majaajillo, isku dayidda majaajillo si fudud loo soo sawiro iyo inaan lagu qancin natiijada. Markii hore, markii aad lahayd rabitaan laakiin aanad lahayn hibo aad wax ku sawirto, waxba ma qaban kartid. Si kasta oo fikradaha asalka ah ee aad laheyd, ama si kasta oo aad u ogaatay nuxurka majaajilada, haddii aadan helin sawir soo jiidasho leh, ma aysan soo jiidan dareenka.
Laakiin maanta in "yaraanta" sawirka lagu xalliyo barnaamijyada kombiyuutarka. Dabcan, kuwani way kooban yihiin, mana heli doontid wax kasta oo male-awaalkaagu ka fikiray; laakiin waa hab lagu xaqiijiyo riyadaas iyada oo loo marayo majaajilooyin si fudud loo soo sawiro oo horeba "horay loo sii qorsheeyay". Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad siiso qaabkaaga.
Iyo barnaamijyada ama bogagga kaa caawin kara inaad ka dhigto rabitaankaaga inaad noqoto "farshaxan buugaagta maadda ah" inay rumowdo. Hagaag, waxaan kugula talineynaa waxyaabaha soo socda:
Pixton, Generator Generator, Toondoo.com, Stripcreator ... Kuwani waa bogag kaa caawinaya inaad abuurto majaajillo si sahlan loo sawiro maxaa yeelay waxay ku siinayaan saldhig aad ku shaqeyso. Intaas waxaa sii dheer, internetka waxaad ka heli kartaa sheylo aad horey ugu sawiratay jilayaasha, waxayna u noqon karaan hage si aad adigu u sawirato. Tusaale ahaan, sawirka eeyga waxaa loo rogi karaa bisad iyadoo la raacayo isla qaabkii waxna laga beddelay.
Canva. Waad ogaan doontaa qalabkan sida ay dad aad u tiro badani u adeegsadaan. Laakiin waxa laga yaabo inaadan ogeyn waa inay leedahay qayb gaar ah oo lagu sameeyo majaajillo sawir-fudud ah: Canva Comic Strip. Dhexdeeda waad ku naqshadeyn kartaa vignettes, backgrounds, qoraalka, iyo xitaa u isticmaali kartaa sawiradaada iyo sawiradaada si aad u abuurto.
Qor Qosol. Taariikh, vignettes, jilayaal ... Waad abuuri kartaa maado qosol ah daqiiqado gudahood. Dabcan, waxay ku saleysan tahay badanaa xargaha caadiga ah, markaa haddii aad raadineyso wax ka casrisan, waxaa laga yaabaa inaad isticmaasho qalab kale.
Comics Comics. Iyo kahadal qalab casri ah. Waa tan adigu Waad awoodaa sameyso majaajillo kuu gaar ah daqiiqado gudahood. Xaqiiqdii, natiijada aad heli doontaa waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan internetka, sidaa darteed waxaa habboon in fiiro gaar ah loo yeesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Si fudud loo sawiro majaajillada
Fikradaha bacaha dharka caadiga ah